January 2019 – Trend.com.mm
ကဲ.. နောက်ဆုံးတော့ The Batman ဇာတ်ကားသစ်အတွက် ထွက်ရှိမယ့်နေ့ကိုသိရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ မင်းသား Ben » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Hollywood, Movies, NewsLeaveaComment on The Batman ဇာတ်ကားသစ်မှာ Ben Affleck ပါဝင်လာတော့မှာမဟုတ်
မီးဖိုချောင်ထဲက ပုန်းကွယ်နေတဲ့ စူပါအစားစာများဆိုတော့ ဘာပါလိမ့်..။ ပုန်းကွယ်နေတယ်ဆိုတာထက်သင်မြင်အောင်မကြည့်လို့ မသိတာပါ။ ဒီလိုစူပါအစားစာတွေရဲ့အာနိသင်ဟာ မင်းကိုဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲပေးနိုင်လဲဆိုတာ သိရင်ယုံမှာတောင် မဟုတ်ပါဘူး။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on မီးဖိုချောင်ထဲက ပုန်းကွယ်နေတဲ့ စူပါအစားစာများ
သူငယ်ချင်းမရှိတဲ့သူဆိုတာတော့ ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။အနည်းဆုံး တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကတော့ရှိမှာပါပဲ။သူငယ်ချင်းရှိတဲ့သူဟာ ရတနာတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားသလိုပဲဆိုတဲ့စကားတောင်ရှိပါတယ်။ကိုယ်တို့တွေဘာလို့သူငယ်ချင်းဆိုတာကိုလိုအပ်တာလဲ၊သူငယ်ချင်းတွေက ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ? *သူငယ်ချင်းတွေဟာ ကြည့်မှန်တစ်ချပ်လိုပါပဲ များသောအားဖြင့် စရိုက်တူ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on သူငယ်ချင်းတွေဟာ ဘာလို့ ကိုယ်တို့ဘ၀ရဲ့အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်နေရတာလဲ?
အပိုင်း (၆)ပိုင်းပါတဲ့ ”Kingdom” ဟာ Netflix ရဲ့original series ဖြစ်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၂၅ရက်နေ့က » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Movies, NewsLeaveaComment on ”Kingdom” ရုပ်ရှင်ထဲက Bae Doona ရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခံနေရ
တောင်ကိုရီးယားရဲ့နာမည်အကျော်ကြားဆုံးကေပေါ့ပ်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ BTS ဟာ နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်တစ်ခု စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။၂၀၁၈ တစ်နှစ်လုံးအောင်မြင်မှုတွေ တရစပ်သိမ်းပိုက်ခဲ့သလို ၂၀၁၉ အစပိုင်းမှာလည်းသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဆဲပါ။ မကြာသေးခင်က » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်တစ်ခု စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပြန်တဲ့ BTS အဖွဲ့
Posted on January 31, 2019 January 31, 2019 by Noel
‘Signal’ ဇာတ်လမ်းတွဲလို့ဆိုလိုက်ရင် မကြည့်ဖူးတဲ့သူ မရှိလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။၂၀၁၆ တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းဆန်ဆန်စုံထောက်အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဟာ Rating အရလည်း 8.8/10 ရှိခဲ့သလို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on ဒုတိယပိုင်းထွက်ရှိလာတော့မယ့် ‘Signal ‘ဇာတ်လမ်းတွဲ
Posted on January 30, 2019 by Noel
ကိုယ်ကြိုးစားသလောက်အရာမထင်ခဲ့တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေရှိလာတဲ့အခါ ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် အကောင်းလည်းမမြင်နိုင်၊ဆက်လည်းမကြိုးစားချင်တော့ပဲ အလွယ်တကူလက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်တဲ့သူတစ်ချို့အတွက် ဒီစာလေးက အင်အားဖြစ်စေမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘ၀ဆိုတာ တစ်ပုံစံတည်း တစ်သမတ်တည်းနေသွားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်က » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on ဘယ်အရာမဆို အလွယ်တကူလက်လျှော့အရှုံးပေးတတ်နေပြီလား?
စိုးရိမ်ပူပန်တာနဲ့ စိတ်ဖိစီးတာရဲ့အကျိုးဆက်တွေက မတူပါဘူး။ ဒါတွေဟာ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ခံစားချက်တွေဖြစ်သလို သူ့ရဲ့ကွာခြားချက်နဲ့ အကျိုးပြုပုံလေးကို ပြောပြပေးပါမယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုက » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြားက ကွာခြားချက်
အနေဝေးတဲ့ချစ်သူစုံတွဲတွေဟာ အချစ်ရေးမှာပိုပြီးခိုင်မြဲကြတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား? တစ်ချို့ကတော့ထင်ကြမယ်။အနေဝေးရင် သွေးအေးသွားမှာ၊ဟိုမှာနောက်တစ်ယောက်တွေ့ချင်တွေ့နေမှာ၊ဝေးဝေးကလူကိုမချစ်နဲ့စသဖြင့်ပေါ့ LDRS အချစ်ရေးမျိုးက အဆုံးသတ်မကောင်းဘူးပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ လေ့လာချက်တွေအရ … » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on LDRS စုံတွဲတစ်ချို့ အချစ်ရေးခိုင်မြဲကြတယ်ဆိုတာ ဒါတွေကြောင့်ပါ…
Bella Throne အသက် ၂၁နှစ်သာရှိသေးတဲ့ Bella Throne ရဲ့လက်ရှိဝင်ငွေဟာ ဒေါ်လာ ၂မီလီလျံဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ အသက် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Hollywood, Movies, NewsLeaveaComment on ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကျိကျိတက် ချမ်းသာနေတဲ့ မင်းသမီးများ